Waxa la sheegay in ay sii badanayaan weerarada ay ka geysanayaan degaanka oromiya kooxda hubaysan ee onag shane – ዜና ከምንጩ
Waxa la sheegay in ay sii badanayaan weerarada ay ka geysanayaan degaanka oromiya kooxda hubaysan ee onag shane
Waxa wargayska addis maleda uu waramay dad ku nool degaanka oromiya gaar ahaan bariga iyi galbeedka gobolka welega dagmooyin kala duwan in ay baryahan danbe ku soo bateen werarada ay gaysanayaan koxda onag shane oo ay halkaasi ku laayaan dad rayd ah.
Ilaha wargayska ayaa sheegay in ay kooxdaasi dadka ku laayaaan cida ay yihiin oo weraradi ay ku soo qaadi jireena ay soo badanayaan, si gaar ahna shan dagmo oo gobolkaasi ka tirsan in dadka ku nool lagu hareersanyahay oo dhibaatooyin faro badanna loo gaysto.
Sida ay sheegayaan ilaha wargaysku shanta dagmo ee kala ah giidha, ayaana, abbi dhengooro, gudheya biila, haro limo iyo tiri dadka ku kala nool in si taxane ah loo gaysto weraro.
Waxa kale oo ilaha wargaysku ay sheegayaan in degaanka oromiya gobolka welega dagmada qondhaala dad badan oo rayid ah oo halkaasi ku noola lagu laayay, sida oo kale waxa halkaasi ka qaxay dad badan oo ka soo hadhay dhibatooyinkii loo gaystay waxaana ay u qaxeen degaanka benishaangul gumz.
Dadka agaasi ku nool ayaa wargayska uu sheegay in dhibatooyinka loo gaysanayo ay sii kordhayaan, dhibatooyinka ay na soo gaadhsiinayaan onag shane waxa ay xiligan xaadirka ah kaga duwanyihiin xiliyadii hore in ay dad uu dhashay qomiyada oromada qaar sida oo kale dhibatooyin uu gaystaan.
Dadka halkaasi ku nool ee dhibatooyinka loo gaysanayo waxa ay aad uga warwarsanyihiin maaha hantidooda in ay waayan ee waxa ay aad uga warwarsanyihiin sidii ay naftooda ugu badbaadin lahaayeen, sida ay sheegayaan ilaha wargaysku dadka halkaasi ku nooli si ay uga badbaadan werarada ay ku soo qaadayaan onag shane hadii ay halkaasi ka carari lahaayeenna waxa si u kas ah looga wada xidhay wadooyinkii ay mari lahaayeen.waxa kale oo ay sheegeen dadka halkaasi ku nooli in xiligan xaadirka ah ay dhibatadooda ugu wayni tahay in wadooyinki ay mari lahaayeen oo dhan laga wada xidhay waxaana ay yidhaahdeen wa in cidi ay khusayso arintani ay wax nooga qabato.
Waxa kale oo la sheegay in dadka isku daya in halkaasi ay ka cararaan si naftooda ay uu badbaadiyaan ee uu carara degaanka beeni shaangul gumz in dhaxda laga af duubto waxaana tusaale uu ah arintani in todobaadkii la soo dhaafay wargayskan lagu sheegay dad rikaab ah oo saarna basas in dhaxda laga af duubtay oo aan wali wax war ah laga haynin waxa ay ku suganyihiin iyo halka ay ku suganyihiin.
Kooxda onag shane intii ay bilawday in dadka uu cararya meelaha ay nabadgalyadu ka jirto ay af duubtaan waxa ka soo wareegtay mudo sida ilaha wargaysku ay sheegeen. Waxa kale oo ay sheegen in ilaa iyo xiligan xaadirka ah dadki hada ka hor la af duubtay loo diray akhiro mooyi ee aanay jirin cid ka soo noqotay.
Waxa kale oo ay xuseen in dagmooyinka giidha ayaana, anger guten iyo haro liimu dadkii ku noola ee halkaasi ku badbaaday ay gabigoodiiba ka qaxeen meelihi ay daganaayeen oo ay ku dhax noolyihiin duurka dhaxdiisa halkaasina ay ku suganyihiin mudo bil ah.
Dhinaca kalena waxa ay sheegeen in dagmada tiri iyo agagaarkeeda laga af duubtay caruur yar yar oo aan la garanaynin tiradooda ila iyo xilgii wararkan la soo diyaariyayna aan la garanaynin waxa ay ku suganyihiin caruurtasi.
Waxa kale oo la xusay in xiligani uu yahay xiligi midhah la go’oynaayay waxaana dhibatooyinka halkaasi loo gaysta ama werarka laug soo qaada dadka u dhashay qoomiyada amxaarada beerahooda midhaha ka soo baxa waxa qaata kooxdaasi hubaysan, berahaasi wixii kooxdaasi ay qaadato maahe wixii kalena lamaba gooyo.
Total views : 6982615